सुजित महत ,
२०७८ असोज १ शुक्रबार ११:२४:००
बजारमा मेडिकल कलेजको किनबेच जारी छ । मुलुकमा चिकित्सा शिक्षाका बेथितिबारे बहस हुन, त्यसतर्फ आमचासो आकर्षित गर्न डा. गोविन्द केसी अनशन नबसी हुन्न । मेडिकल कलेजको किनबेचमा खासै चासो देखिएको छैन, किनकि यसका सम्भावित परिणामलाई मुद्दा बनाएर डा. केसी अनशन बसिसकेका छैनन् । केही अघि पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजको स्वामित्व किनबेच यसकारण चल्तीका सञ्चारमाध्यमका समाचार बने, त्यो विदेशी लगानीको संस्था थियो । भारतीय मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप सबै स्वामित्व बेचबाच गरी फर्किने सम्झौता थियो । मुलुकमै निजी क्षेत्रको पहिलो मेडिकल कलेज मणिपाल पोखरेली साहुहरूको बतास अर्गनाइजेसन र अटोवेज ग्रुपले किन्ने सम्झौता गरेको थियो ।
मणिपालको किनबेचबारे त काफी समाचार सार्वजनिक भइसके । तर, वर्षदिनअघि प्रतिष्ठितमा दरिने काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)को बहुमत स्वामित्व किनबेच भएको थियो । काठमाडौंको सिनामंगल र भक्तपुरको दुवाकोटमा अस्पतालका साथै काफी बहुमूल्य सम्पत्ति भएको केएमसी विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माले किनेका थिए । केएमसी अहिले शर्माकै व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको स्वामित्व पनि शर्माले नै किनिसकेको हल्ला चल्यो ।
सम्झौता भए पनि केही हकवालाले बहुमत सेयर बेच्न आनाकानी गरेका कारण आफूले बैना रकम नै फिर्ता लिइसकेको शर्माले बताएकाले अहिलेसम्म किनबेच भइनसकेको मानौँ । तैपनि, मेडिकल कलेजको स्वामित्व बेच्न कतिपय लगानीकर्ता तयार भएको अवस्थामा जुनसुकै वेला स्वामित्व हेरफेर हुन सक्ने देखियो । यस्तै, चल्तीकै नेपाल मेडिकल कलेज (एनएमसी)को स्वामित्व किनबेच भएको खरिदकर्ता बसरुद्दिन अन्सारीलाई कलेजको प्रबन्ध निर्देशक भएकामा फेसबुकमा साथी रहेका वीरगन्जिया साथीहरूले बधाई दिएपछि थाहा पाइयो । काठमाडौंकै किस्ट मेडिकल कलेजको स्वामित्वमा त अलि अघि नै हेरफेर भएको थियो, आशिष थापा अगुवाईको ग्रुपले बहुमत स्वामित्व किनेर व्यवस्थापन लिएको थियो । देवदह मेडिकल कलेजको व्यस्थापन लुम्बिनी मेडिकल कलेजले लिएको छ ।
निजी लगानीका कम्पनी, आफ्नो जायजेथा बेचे त के भयो, तिनको अधिकार भन्न पनि सकिएला । निजी लगानीकै कम्पनीको किनबेचबारे पनि नागरिक सुसूचित हुनुपर्छ । कुनै उत्पानमूलक उद्योगकै उत्पादन खरिद गर्दा पनि कतिपय सचेत उपभोक्ताले लगानीकर्ताको प्रतिष्ठा पनि ख्याल गरेको हुन्छ । हुलासको कर्कटपातासँग मुलुकको पुरानोमध्येको औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनको प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ ।
बुद्ध एयरमा यात्रा गर्ने कतिपय यात्रुमा वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको मिडियामार्फत सार्वजनिक हुने विचार, व्यक्तित्वको पनि प्रभाव परेको हुन सक्छ । व्यावसायिकमा अब्बल मानिने सोल्टी ग्रुपले कुनै कम्पनीको व्यवस्थापन लिँदा सम्बद्ध उपभोक्ताले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने अवस्था हुन सक्छ । उत्पादन र सेवासँग त्यसको लगानीकर्ता जोडिने भएकाले लगानीकर्ता कुनै विवादमा परे कम्पनीको व्यापार घट्छ । जबकि, मालिक विवादमा पर्दैमा उत्पादन र सेवाको गुणस्तर खस्किने त होइन । कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भए सेयरको भाउ घट्छ ।
अब अस्पताल वा शिक्षण संस्थामा यो लागू नहुने कुरा हुँदैन । मेडिकल कलेज, अस्पतालमा त लगानीकर्ता, यसको स्वामित्व हस्तान्तरण पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । उपचारार्थ नर्भिक अस्पतालमा जानेमध्ये धेरैलाई त्यसका मालिक वसन्त चौधरीबारे थाहा होला । पुरानो व्यापारिक घरानाका हुन्, कवि पनि हुन् भनेर थप विश्वास गरेको हुन सक्छ । मेडिसिटी जाने धेरैलाई उपेन्द्र महतोको पृष्ठभूमि थाहा होला । यसैले व्यापारिक संस्थाको स्वामित्व किनबेच, हस्तान्तरण सार्वजनिक चासोको मामिला हो, यसलाई गोप्य राख्न पाइन्न ।
सम्भवतः केही दिनमै ओम अस्पताल (चाबहिल)को स्वामित्व मण्डिखाटारमा ह्याम्स हस्पिटल सञ्चालन गरिरहेका लगानीकर्ताको स्वामित्वमा जाँदै छ । तर, यसको स्वामित्व हेरफेर, व्यवस्थापन परिवर्तन भएको कुरा काठमाडौंमा सूचनामा पहुँच हुने, चल्तापुर्जाबीच क्याफे/भट्टीको गफमा सीमित हुने सम्भावना छ । सम्बद्ध संस्थाले सार्वजनिक गर्न चासो देखाउनेछैन । विदेशी लगानी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी नजोडिएको हुँदा मिडियाको रुचि जगाउनेछैन । तर, थाहा पाउन जरुरी छ ।
ओममा विशुद्ध व्यापारीको पनि लगानी होला, तर हामीले त डा. भोला रिजाललगायत चल्तीका चिकित्सकले लगानी गरेको अस्पतालको रूपमा चिन्छौँ । ह्याम्स मेडिकल उपकरणको व्यापारबाट स्थापित व्यापारीले चलाएको अस्पताल हो । मालिक फेरिएसँगै ओमले दिने सेवाको शुल्क ह्वात्तै बढ्न सक्छ, मुनाफा गर्ने नयाँ शैली अपनाइन सक्छ । व्यवस्थापन फेरिनुअघि उपचार गराएको बिरामी व्यवस्थापन फेरिएपछि पुग्दा अनुमानित खर्च बढ्न सक्छ ।
मेडिकल कलेज बजारका किनबेच, व्यवस्थापन परिवर्तनका विषय माथि उल्लेख गरिएकामा सीमित छैनन् । तिनले अलि बेसी नै प्रश्न गर्नुपर्ने बनाउँछन्, बहस माग गर्छन् । मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुनुपर्ने समय जति नजिकिँदै छ, यसको किनबेच बढ्दो छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा ऐन लागू भएको १० वर्षपछि मुलुकभित्र सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने उल्लेख छ । अर्थात्, अब सात वर्षपछि मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक, सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्न थाल्नुपर्नेछ । गैरनाफामूलक÷सेवामूलक हुनुपर्ने ‘त्रास’मा बेच्न चाहनु त स्वाभाविकै देखिन्छ, तर किन्न चाहनेको उद्देश्य के हो ? सात वर्षमै ‘लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट’ गर्नलाई हो भनिहाल्न त विनाआधार मिल्दैन ।
डा. केसीको पटक–पटकको सत्याग्रहीय दबाबका कारण चिकित्सा शिक्षाका बेथिति एकहदसम्म नियन्त्रण हुँदा मेडिकल कलेजहरूको आम्दानी घटेको छ । मेडिकल कलेजमा लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आँखा लगाएपछि एक समय सबैजसो मेडिकल कलेजको सिट (एमबिबिएस भर्नाका लागि ) बढेर १५० पुग्यो । सत्याग्रहको माग सम्बोधन गर्न मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेपछि सबैको एक सयमा झरेको छ । अहिले एक सयभन्दा बेसी सिटसंख्याका मेडिकल कलेज छैनन् । प्रतिविद्यार्थी आम्दानी पनि घटेको छ ।
एमबिबिएसका लागि ३६ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारित छ, बढी लिन खोज्दा विद्यार्थीले पोल खोल्दिएर कलेज निर्धारित शुल्कमै पढाउन बाध्य भएका उदाहरणहरू छन् । केसीको सत्याग्रहले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिन खोजे विरोध गर्ने शक्ति विद्यार्थीलाई दिएको छ । पहिले विदेशी विद्यार्थीका लागि १० प्रतिशत कोटा दिइए पनि मेडिकल कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीले आवेदन नै नगरेको भन्दै सक्दो विदेशी (धेरै भारत र अलिअलि माल्दिभ्सका) विद्यार्थी भर्ना गर्थे ।
जसबापत मेडिकल कलेजलाई धेरै आम्दानी हुन्थ्यो । स्वदेशी विद्यार्थीसँग ५० लाख रुपैयाँ असुल्दा विदेशी विद्यार्थीसँग त्यति नै भारु अर्थात् ८० लाख रुपैयाँ असुलिन्थ्यो । अहिले कोटाभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न गाह्रो मात्रै छैन, कोटा भरिने गरी नै विदेशी विद्यार्थी नपाइरहेको अवस्था छ ।
खुमा अर्यालको हातमा गण्डकी र युनिभर्सल दुई मेडिकल रहेकै थियो, अब शर्माको हातमा नोबेल र केएमसी, अन्सारीको हातमा नेसनल मेडिकल कलेज र एनएमसी दुई–दुई मेडिकल कलेज भएको छ । व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेका दुई–दुईबाहेक यिनको अरूमा पनि लगानी हुन सक्छ । यिनै साहुहरू थप मेडिकल कलेज किन्न बजारमा सक्रिय भएकाले चिकित्सा शिक्षामा ‘मनोपोली’को जोखिम त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।
पोस्ट ग्य्राजुएसन (एमडी)मा त झन् ‘लुट’ थियो । आकर्षक मानिने विषयमा करोड रुपैयाँकै कारोबार हुन्थ्यो । अहिले २२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, त्यसमा पनि १२ लाख रुपैयाँ मात्र मेडिकल कलेजको खातामा पुग्छ । एमडीका विद्यार्थीले स्वास्थ्य सेवा दिएको तलबबापत ६ लाख रुपैयाँ पाउँछन् भने दुई लाख रुपैयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले लैजान्छ । मेडिकल कलेजको भागमा १४ लाख ।
अधिकांश मेडिकल कलेजहरू विद्यार्थीमाथि गरिने ‘ब्रह्मलुट’मै रमाए । अस्पतालको गुणस्तर वृद्धिमा रुचि देखाएनन् । कलेजमा सिट बढाउने प्रक्रियाका लागि आउने निरीक्षकहरूलाई देखाउन पैसा तिरेर नक्कली बिरामी ल्याई अस्पतालका बेडमा सुताए । विद्यार्थीबाट असुलेको शुल्कबाटै अस्पतालको घाटा पुर्ताल भइजान्थ्यो ।
अहिले विद्यार्थीबाटै हुने आम्दानी घटेर अस्पताल चलाउनै मुस्किल, अस्पताल चलाउन मुस्किल परेपछि मेडिकल कलेज चलाउनै मुस्किल परेको हुन सक्छ । यसैले ‘सेल’मा रहेका मेडिकल कलेज किन्न कलेज र अस्पताल पनि मज्जाले चलेको नोबेलजस्तो मेडिकल कलेजका सञ्चालकको रुचि देखिनु स्वाभाविक देखिन सक्छ । किनेका मेडिकल कलेज घाटामै भए पनि नाफामा पु¥याउने आत्मविश्वास जाग्न सक्छ ।
फेरि पनि प्रश्न उब्जिन्छ, केएमसीको त अस्पताल पनि गज्जबले चलेको थियो । बिरामीको भीडभाड हुने अस्पतालमा नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल पनि पर्छ । एनएमसीको शिक्षण अस्पताल त नयाँ प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीले वीरगन्जमा चलाएको नेसनल मेडिकल कलेजको अस्पतालभन्दा धेरै चल्तीको अस्पताल थियो । फेरि केएमसी, एनएमसी तुलनात्मक रूपमा व्यावसायिक थिए । विद्यार्थीबाट निर्धारितभन्दा बेसी शुल्क असुलेको गुनासो सायदै सुनियो, तिनैको स्वामित्व संरचना हेरफेर भएको छ, व्यवस्थापन परिवर्तन भएको छ ।
मुलुकमा सरकारीसमेत २२ मेडिकल/डेन्टल कलेज सञ्चालित छन् । खुमा अर्यालको हातमा गण्डकी र युनिभर्सल दुई मेडिकल रहेकै थियो, अब शर्माको हातमा नोबेल र केएमसी, अन्सारीको हातमा नेसनल मेडिकल कलेज र एनएमसी दुई–दुई मेडिकल कलेज भएको छ ।
व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेका दुई–दुईबाहेक यिनको अरूमा पनि लगानी हुन सक्छ । यिनै साहुहरू थप मेडिकल कलेज किन्न बजारमा सक्रिय भएकाले चिकित्साशिक्षामा ‘मनोपोली’को जोखिम त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ । संयोग कस्तो भने तीनैजना राजनीतिमा पनि सक्रिय छन् । कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाका दाहिने अर्याल कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा परिसकेका व्यवसायी हुन् भने कोइराला परिवारनजिक शर्मा गत आमनिर्वाचनमा पराजित भएका थिए । गत आमनिर्वाचनमा पराजित अन्सारी केपी ओलीका खास हुन् ।
सरकारी मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु
मेडिकल कलेजका लागि २० बिघा जग्गा उपलब्ध
बिएन्डसी कलेजको अनुगमन गर्न समिति
कागजात मिलाएर झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिने निर्णय